Найдено 78 ~ मत्ती, मार्क, लूका, जन, प्रेरित, रोमी, १ कोरिन्थी, २ कोरिन्थी, गलाती, एफिसी, फिलिप्पी, कलस्सी, १ थिस्सलोनिकी, २ थिस्सलोनिकी, १ तिमोथी, २ तिमोथी, तीतस, फिलेमोन, हिब्रू, जेम्स, १ पत्रुस, २ पत्रुस, १ यूहन्ना, २ यूहन्ना, ३ यूहन्ना, यहूदा, प्रकाश
त्‍यसपछि शैतानले येशूको परीक्षा लेओस् भनेर पवित्र आत्‍माले येशूलाई उजाड-स्थानमा लानुभयो।
त्‍यसै बेला शैतानले उहाँकहाँ आएर भन्‍यो, “साँच्‍चै तपाईं परमेश्‍वरका पुत्र हुनुहुन्‍छ भने यी ढुङ्गाहरूलाई रोटी होइजा भन्‍नुहोस्।”
त्‍यसपछि शैतानले येशूलाई पवित्र सहर यरूशलेममा लग्‍यो र मन्‍दिरको टुप्‍पोमा पुर्‍याएर भन्‍यो,
फेरि शैतानले येशूलाई एउटा अग्‍लो पहाडमा लग्‍यो र संसारका सबै राज्‍य र तिनीहरूको चमक देखाउँदै भन्‍यो,
येशूले भन्‍नुभयो, “ए शैतान, यहाँबाट गइहाल्! धर्मशास्‍त्रमा लेखिएको छ— ‘तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्‍वरलाई मात्र ढोग् र उहाँकै सेवा गर्‌’।”
शैतानले येशूलाई छोडेर गयो अनि स्‍वर्गदूतहरू आएर येशूको सेवा गरे।
यदि शैतानले आफैंलाई धपाएर आफ्‍नै विरोध गर्छ भने त्‍यसको राज्‍य कसरी टिक्‍न सक्‍छ र?
सामाको बिउ छर्ने शत्रुचाहिँ शैतान हो अनि बाली थन्‍क्‍याउने बेला भनेको चाहिँ यस संसारको आखिरी दिन हो र बाली काट्‍ने र थन्‍क्‍याउने खेतालाचाहिँ स्‍वर्गदूतहरू हुन्।
येशूले पत्रुसतिर फर्केर भन्‍नुभयो, “ए शैतान, मेरो पछि हट्। तँ मेरो बाटोमा ठेस लाग्‍ने ढुङ्गा राख्‍न खोज्‍छस्! तेरो यो विचार परमेश्‍वरबाटको होइन, तर मान्‍छेबाटको हो।”
त्‍यहाँ शैतानले उहाँलाई चालीस दिनसम्‍म पापमा फसाउन जाँच गर्‍यो। त्‍यहाँ जङ्गली जनावरहरू पनि थिए अनि स्‍वर्गदूतहरूले आएर उहाँको सेवा गरे।
त्‍यसैले येशूले ती धर्म-गुरुहरूलाई बोलाएर यस कुराको बारेमा दृष्‍टान्‍तको रूपमा यस्‍तो कथा भन्‍नुभयो, “शैतान आफैंले आफैंलाई कसरी खेद्‌न सक्‍ला र?
त्‍यसै गरी शैतानको राज्‍यमा पनि फाटो आयो भने त्‍यो टिक्‍दैन र टुक्रिएर आफैं नाश हुन्‍छ।
कति जनाको मनमा यो शिक्षा बाटोमा परेको बीउजस्‍तो हुन्‍छ। शिक्षा सुन्‍नासाथ शैतान झट्टै आएर यसलाई टिपी लैजान्‍छ।
तुरुन्‍तै येशूले आफ्‍नो मुहार फर्काउनुभयो र चेलाहरूतिर हेरेर पत्रुसलाई हकार्नुभयो, “ए शैतान, मबाट पछि हट्! तेरो विचार परमेश्‍वरपट्टिको होइन, तर मान्‍छेको हो।”
त्‍यहाँ शैतानले उहाँलाई चालीस दिनसम्‍म परीक्षामा पारेर पापमा फसाउन खोज्‍यो। ती चालीसै दिनसम्‍म येशूले केही पनि खानुभएको थिएन। त्‍यसो हुँदा उहाँलाई साह्रै भोक लागेको थियो।
त्‍यति बेला नै शैतानले येशूलाई भन्‍यो, “साँच्‍चै तपाईं परमेश्‍वरका पुत्र हुनुहुन्‍छ भने यस ढुङ्गालाई रोटी होइजा भन्‍नुहोस् अनि रोटी हुनेछ।”
त्‍यसपछि शैतानले येशूलाई अग्‍लो पहाडमा लगेर एकै छिनमा संसारका सबै राज्‍यहरू देखाउँदै उहाँलाई भन्‍यो,
अब शैतानले येशूलाई यरूशलेममा लग्‍यो र मन्‍दिरको टुप्‍पामा पुर्‍याएर भन्‍यो, “यदि साँच्‍चै तपाईं परमेश्‍वरकै पुत्र हुनुहुन्‍छ भने लौ तपाईं यहाँबाट तल हामफाल्‍नुहोस्
शैतानले येशूलाई अनेक किसिमले परीक्षामा पारेर पापमा फसाउन खोजिसकेपछि फेरि मौका नपरूञ्‍जेलसम्‍मको लागि छोडेर गयो।
बाटोमा परेको बिउले बुझाउँछ कि तिनीहरूले वचन सुन्‍न त सुन्‍छन् तर मनमा राख्‍न सक्‍दैनन्, कारण विश्‍वास गरेर बाँच्‍न नपाऊन् भनेर शैतान आउँछ अनि सुनेका कुरा टिपेर लैजान्‍छ।
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “मैले शैतानलाई बिजुलीजस्‍तै आकाशबाट बसिरहेको देखें।
त्‍यसैगरी यदि शैतानले आफ्‍नो विरोध आफैं गर्छ भने त्‍यसको राज्‍य कसरी टिक्‍न सक्‍छ र? तिमीहरू मलाई भूतको राजा बालजिबुलको शक्तिले भूत निकाल्‍छ भन्‍छौ।
यो अब्राहामकी छोरीलाई शैतानले अठार वर्षदेखि पासोमा पारेको थियो, के पवित्र विश्रामको दिन हो भनेर तिनलाई छुट्‍कारा दिनुहुँदैन र?”
त्‍यसै समय बाह्र जना चेलाहरूमध्‍ये यहूदा इस्‍करियोत भन्‍नेको हृदयमा शैतान पस्‍यो।
त्‍यसपछि येशूले भन्‍नुभयो, “सिमोन, ए सिमोन सुन, शैतानले तिमीहरू सबैलाई गहुँजस्‍तै गरी निफन्‍ने आज्ञा पाएको छ।
येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “के मैले तिमी बाह्रै जनालाई छानिनँ र? तैपनि तिमीहरूमध्‍ये एक जनाचाहिँ शैतान हो।”
तिमीहरू आफ्‍नै बुबा शैतानका सन्‍तान हौ र तिमीहरू आफ्‍ना पिताले भनेअनुसार गर्न तयार छौ। त्‍यो त सुरुदेखि नै ज्‍यानमारा हो, त्‍यो त सत्‍यमा कहिल्‍यै पनि टिक्‍न सक्‍दैन किनभने त्‍यसमा सत्‍य नै छैन। आफ्‍नो स्‍वभावअनुसार त्‍यसले त सधैँ झूट बोल्‍छ। त्‍यसैले त्‍यो त झूट बोल्‍नेहरूकै पिता हो।
येशूले आफ्‍ना चेलाहरूसँग बेलुकीको खाना खाँदै हुनुहुन्‍थ्‍यो। त्‍यति बेला शैतानले सिमोनका छोरा यहूदा इस्‍करियोतको हृदयमा येशूलाई पक्राइदिने विचार हालिदिइसकेको थियो।
यहूदाले रोटी लिनेबित्तिकै उसको मनमा शैतान पस्‍यो अनि येशूले उसलाई भन्‍नुभयो, “तिमीले जे गर्न लागेका छौ, चाँडै गरिहाल।”
तब पत्रुसले भने, “ए हननिया, आफ्‍नो हृदयमा शैतानलाई राज्य गर्न दिएर तिमीले किन पवित्र आत्‍मासँग झूटो बोल्‍यौ? खेत बेचेको अलिकति पैसा तिमीहरूले किन आफ्‍नै लागि लुकाएर राखेका छौ?
“तँ सबै असल कुराको शत्रु अनि दुष्‍ट चाल र धुर्त्‍याइँले भरिएको शैतानको बच्‍चा होस्। के तँ प्रभुको सोझो बाटोलाई बङ्ग्‍याउन कहिल्‍यै छोड्दैनस्?
तिमीले तिनीहरूका आँखा खोलिदिएर तिनीहरूलाई अँध्‍यारोबाट उज्‍यालोमा र शैतानको शक्तिदेखि परमेश्‍वरतर्फ फर्काउनुपर्छ र तिनीहरूले ममाथि विश्‍वास गर्छन् अनि तिनीहरूको पाप मेटिनेछ र तिनीहरूले परमेश्‍वरका चुनिएका जनहरूको संगतिमा बस्‍न पाउनेछन्’।
शान्‍ति दिने परमेश्‍वरले चाँडै शैतानलाई तिमीहरूका खुट्टामुनि कुल्‍चाउनुहुनेछ। हाम्रा प्रभु येशूको अनुग्रह तिमीहरूसँग रहोस्।
उसको शारीरिक स्‍वभाव नाश होस् भनेर तिमीहरूले यस मानिसलाई शैतानको हातमा सुम्‍पिनुपर्छ र प्रभुले न्‍याय गर्ने दिनमा उनको आत्‍माचाहिँ बाँच्‍न सकोस्।
यसरी शैतानले हामीमाथि मौका छोप्‍न नपाओस् किनभने हामीलाई त्‍यसका सबै युक्तिहरू थाहा छ।
यस युगको देवताले येशूमा विश्‍वास नगर्नेहरूको बुझ्‍ने शक्तिलाई नै अन्‍धो बनाइदिएको छ। ख्रीष्‍ट परमेश्‍वरकै स्‍वरूप हुनुहुन्‍छ, उहाँकै बारेमा भएको सुसमाचारबाट आउने चहकिलो प्रकाश अविश्‍वासीहरूले नदेखून् भनी शैतानले तिनीहरूलाई अन्‍धो बनाइदिएको छ।
२ कोरिन्थी ६:१५
ख्रीष्‍ट र शैतानका कुरा कसरी मिल्‍छ र? विश्‍वास गर्ने र विश्‍वास नगर्नेहरूका पनि कुरै मिल्‍दैन।
२ कोरिन्थी ११:३
तर सर्पको रूप लिएर शैतानले चलाकी गरेर हव्‍वालाई ठगेजस्‍तै तिमीहरूको ख्रीष्‍टमा रहेको सोझो र चोखो मन नै बिगार्ने हो कि भन्‍ने मलाई डर लागेको छ।
यो कुनै अनौठो कुरा होइन। शैतान पनि उज्‍यालो स्‍वर्गदूतजस्‍तै देखा पर्न सक्‍छ।
२ कोरिन्थी ११:१५
त्‍यसो हुँदा शैतानका सेवकहरू पनि परमेश्‍वरका अघि धर्मी सेवकजस्‍तै देखा पर्नु अचम्‍मको कुरो होइन। आखिरमा तिनीहरूले आफ्‍नै कामको फल भोग्‍नैपर्नेछ।
२ कोरिन्थी १२:७
मैले धेरै अचम्‍मका थोकहरू देखें भनी घमण्‍डले फुलिनबाट रोक्‍न मलाई शरीरमा काँडाले घोच्‍ने एउटा पीडा दिइयो। यसले शैतानको दूतझैँ भएर चस-चस बिझाई मलाई घमण्‍ड गर्नबाट रोक्‍छ।
शैतानले मौका छोप्‍न नपाओस्।
शैतानका सबै युक्तिको सामना गर्न परमेश्‍वरले दिनुभएको उहाँका सबै हातहतियार भिर।
१ थिस्सलोनिकी २:१८
हामी तिमीहरूकहाँ आउन खोज्‍यौं। म पावल चाहिँ घरीघरी आउन निक्‍कै कोसिस गरें तर शैतानले हामीलाई आउनै दिएन।
२ थिस्सलोनिकी २:९
त्‍यो व्यवस्था भङ्ग गर्नेले शैतानको शक्ति लिएर आउनेछ अनि सबै किसिमका झूटा चिन्‍ह र अचम्‍म-अचम्‍मका कामहरू गर्नेछ।
१ तिमोथी १:२०
तिनीहरूमा हुमेनियस र अलेक्‍जेन्‍डर हुन्। परमेश्‍वरलाई निन्‍दा गर्न छोडून् भनेर मैले तिनीहरूलाई शैतानको हातमा सुम्‍पिदिएको छु।
त्‍यस्‍तो मानिस भरखर विश्‍वास गर्ने सिकारु पनि हुनुहुँदैन। नत्र ऊ घमण्‍डले फुलेर शैतानझैँ दण्‍डमा परेर पतन हुनेछ।
हेर-विचार गर्ने मानिसले मण्‍डली मात्र होइन, मण्‍डलीबाहिर पनि मान पाएका हुनुपर्छ। त्‍यसो भए मात्र उसलाई मानिसहरूले निन्‍दा गर्नेछैनन् र शैतानको जालमा पनि पर्नेछैन।
१ तिमोथी ५:१५
२ तिमोथी २:२६
यसरी तिनीहरू आफ्‍ना होशमा आएर शैतानको फन्‍दाबाट उम्‍कन पाउनेछन् किनभने उनीहरूलाई शैतानले आफ्‍नो कामको लागि पक्रेर राखेको छ।
ती छोरा-छोरी रगत र मासुको शरीर भएकाले येशू पनि तिनीहरूजस्‍तै मासु र रगत भएको मानिस हुनुभयो। उहाँ आफैंले मृत्‍यु भोग्‍नुभएर मृत्‍युको शक्ति भएको शैतानलाई नाश पार्नुभयो।
यस्‍तो बुद्धि माथि परमेश्‍वरबाट आएको होइन, यो त यहीं तल उब्‍जेको संसारकै अनि शैतानको बुद्धि हो।
विश्‍वासमा दह्रो भएर शैतानको विरोध गर किनभने तिमीहरूजस्‍तै चारैतिर अरू विश्‍वासीहरूले पनि दु:ख भोगेका छन् भन्‍ने तिमीहरूलाई थाहै छ।
१ यूहन्ना २:१३
बुबाहरू हो, सुरुदेखि नै हुनुहुनेलाई तिमीहरूले चिन्‍छौ। यसकारण म तिमीहरूलाई लेख्‍दै छु। तन्‍नेरीहरू हो, तिमीहरूले दुष्‍ट शैतानलाई जितेका छौ। त्‍यसैकारण म तिमीहरूलाई लेख्‍दै छु।
१ यूहन्ना २:१४
बालकहरू हो, तिमीहरूले परमेश्‍वर पितालाई चिनेका छौ। त्‍यसैकारण मैले तिमीहरूलाई लेखेको हुँ। बुबाहरू हो, जो सुरुदेखि नै हुनुहुन्‍छ, उहाँलाई तिमीहरू चिन्‍दछौ। त्‍यसैकारण मैले तिमीहरूलाई लेखेको हुँ। तन्‍नेरीहरू हो, तिमीहरू बलिया छौ अनि परमेश्‍वरको वचन तिमीहरूभित्र रहेको छ। तिमीहरूले दुष्‍ट शैतानलाई जितेका छौ। त्‍यसैकारण तिमीहरूलाई लेखेको हुँ।
१ यूहन्ना ३:८
पाप गरिरहनेचाहिँ शैतानको मानिस हो। शैतानले सुरुदेखि नै पाप गर्दैआएको छ। यसकारण शैतानको कामलाई नाश पार्न परमेश्‍वरका पुत्र प्रकट हुनुभएको छ।
१ यूहन्ना ३:१०
परमेश्‍वरका सन्‍तान र शैतानका सन्‍तानलाई यसरी नै चिन्‍न सकिन्‍छ कि परमेश्‍वरको अघि ठीक काम नगर्ने र आफ्‍ना दाजुभाइलाई माया नगर्नेचाहिँ परमेश्‍वरको सन्‍तान होइन।
१ यूहन्ना ३:१२
हामी कयिनजस्‍तो हुनुहुँदैन। उसले शैतानको सन्‍तान भएर आफ्‍नै भाइ हाविललाई मार्‍यो। कयिनले किन आफ्‍नै भाइलाई मार्‍यो? किनभने उसको काम ठीक थिएन। तर उसको भाइको कामचाहिँ ठीक थियो।
१ यूहन्ना ५:१९
पूरै संसार शैतानको अधीनमा भए पनि हामीचाहिँ परमेश्‍वरका सन्‍तान हौं भनी हामीलाई थाहा छ।
तर मुख्‍य स्‍वर्गदूत मिखाएलले पनि मोशाको लाशको बारेमा शैतानसँग तर्क गर्दा त्‍यसलाई निन्‍दा गरेर दोष लगाएनन्। खालि ‘प्रभुले तँलाई झपार्नुहुन्‍छ’ भने।
मलाई तिम्रो दु:ख-कष्‍ट थाहा छ, तिमी गरीब छौ भनेर पनि जान्‍दछु, तर वास्तवमा तिमी धनी छौ! यहूदी हौं भनी बहाना गर्नेहरूले तिम्रा विरुद्धमा गरेका नराम्रा कुरा मलाई थाहा छ, तिनीहरू शैतानका गुठका हुन्।
तिमीहरूलाई पर्न आँटेको कुनै सङ्‌कटबाट नडराऊ। तिम्रो विश्‍वास जाँच्‍न शैतानले तिमीहरूमध्‍ये कसै-कसैलाई झ्‍यालखानमा हालिदिनेछ। तर तिम्रो कष्‍ट दश दिनसम्‍म मात्रै हुनेछ। मर्नुपरे पनि ममाथि विश्‍वास गर्न नछोड र म तिमीलाई विजयको इनामको रूपमा जीवन दिनेछु।
तिमीहरू शैतानको सिंहासन भएको ठाउँमा बास बस्‍छौ भन्‍ने कुरा मलाई थाहा छ। तिमीहरू मप्रति भक्त रहेका छौ र ममाथि विश्‍वास गर्न छोडेका छैनौ भन्‍ने म जान्‍दछु। मेरो विश्‍वासी साक्षी एन्‍टिपासलाई शैतानको वासस्‍थानमा मारिएको बेलामा पनि तिमीहरूले विश्‍वास छोडेनौ।
“तर यस्‍ता शिक्षामा नलागेका र शैतानका गहिरा रहस्‍यहरू नजानेका थिआटीराको मण्‍डलीमा भएका अरूहरूलाई भन्‍छु कि म तिमीहरूलाई कुनै भार लाउनेछैनँ।
हामी यहूदी हौं भनेर ढाँट्‍ने शैतानका गुठका त्‍यहाँ जो छन्, उनीहरूलाई म तिम्रा पाउमा दण्‍डवत् गर्न लाउनेछु र मैले तिमीलाई प्‍यार गरिराखेको छु भन्‍ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुनेछ।
यसरी त्‍यो अजिङ्गर, जो सुरुको सर्प हो, जसको नाम दुष्‍टात्‍मा वा शैतान पनि हो, जसले सारा संसारलाई भर्माएर राखेको थियो, त्‍यसैलाई यसका दूतहरूसित स्‍वर्गबाट पृथ्‍वीमा फ्‍याँकिएको थियो।
तब मैले स्‍वर्गमा यसो भनिएको एउटा ठूलो सोर सुनें, “अबदेखि हाम्रा परमेश्‍वरले उद्धार गर्नुहुन्‍छ र उहाँले आफ्‍नो राजकीय शक्ति देखाउनुभएको छ। अब उहाँको ख्रीष्‍टले अधिकार देखाउनुभएको छ। अब हाम्रा दाजुभाइहरूलाई दिन-रात परमेश्‍वरको अगाडि दोष लगाउने शैतान स्‍वर्गबाट फालिएको छ।
यसकारण स्‍वर्ग र त्‍यहाँ रहनेहरू सबै रमाओ! तर पृथ्‍वी र समुद्रलाई हाय! हाय!! किनभने तिनीहरूका बीचमा शैतान राँकिएर आएको छ र त्‍यसको समय सिद्धिन लागेको छ भन्‍ने त्‍यसलाई थाहा छ।”
उनले जोडले यसो भनेर कराए, “ध्‍वंश भयो! त्‍यो ठूलो बेबिलोन ध्‍वंश भयो! अब शैतानका भूतहरू र अशुद्ध आत्‍माहरू र अनेक घिनलाग्‍दा र फोहोरी पक्षी त्‍यहाँ बस्‍छन्
अनि तिनले त्‍यो रातो अजिङ्गरलाई पक्रेर एक हजार वर्षसम्‍म बाँधिदिए। अजिङ्गरचाहिँ सुरुको सर्प वा दुष्‍टात्‍माको राजा वा शैतान हो।
हजार वर्ष बितेपछि शैतान आफ्‍नो कैदबाट मुक्त हुनेछ र
पृथ्‍वीका चारैतिर भएका जाति-जातिका मानिसहरूलाई अर्थात् “गोग” र “मागोग” लाई ठग्‍न जानेछ। शैतानले समुद्रको बालुवाजत्तिकै सङ्‍ख्‍यामा लडाइँ गर्न तिनीहरूलाई भेला गराउनेछ।
जाति-जातिलाई ठग्‍ने त्‍यो दुष्‍ट शैतानचाहिँ आगो र गन्‍धकको कुण्‍डमा फ्‍याँकियो, जहाँ त्‍यो जनावर र झूटा अगमवक्ता पहिल्‍यै फ्‍याँकिएका थिए। तिनीहरूले रात-दिन सधैँभरि दु:ख-कष्‍ट भोगिरहनेछन्।